जाजरकोटमा रुघाखोकी र स्वाइनफ्लु, दिनहुँ सयौं बिरामी | MYAGDINEPAL
Home / समाचार / जाजरकोटमा रुघाखोकी र स्वाइनफ्लु, दिनहुँ सयौं बिरामी
जाजरकोटमा रुघाखोकी र स्वाइनफ्लु, दिनहुँ सयौं बिरामी
जाजरकोट, वैशाख ३ - दुई सातादेखि फैलिएको मौसमी रुघाखोकी र स्वाइन फ्लुबाट बिरामी हुनेहरूको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । टालेगाउँ-७ का दलबहादुर शाहीको बुधबार मृत्यु भएको छ । उनीसहित रुघाखोकी र स्वाइन फ्लुको संक्रमणले मृत्यु भएकाको संख्या १७ पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रहरूमा अझै पनि पर्याप्त संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी पुग्न सकेका छ्रैनन् ।
'स्वास्थ्यकर्मीसमेत बिरामी परेर सदरमुकाम लगिएको छ । अरू बिरामीको झन् बेहाल छ,' रोकायले भने । अहेब गिरीलाई थप उपचारका लागि घोडा चढाएर जिल्ला अस्पताल ल्याइएको छ । पैंकतर्फ बुधबार डा. विभान्त साहको टोली खटाइएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले बताए ।
प्रतिकूल मौसमका कारण रोगको प्रकोप झन् बढेको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. पन्तले बताए । उमालेको पानी खाने, आराम गर्ने, चिसोबाट बच्ने, आवतजावतमा बन्द गर्ने, हात नमिलाउन, मास्क लगाउने, जथाभावी नथुक्ने, रोगको लक्षण देखिनासाथ स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउनेलगायत सावधानी अपनाउन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले आहवान गरेको छ । जोखिममा रहेका बिरामीलाई 'ट्यामी फ्लु' औषधिको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
जिल्लामा स्वाइन फ्लुको प्रकोप फैलिएर स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । तर यहाँस्थित जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक बोम बीसी भने मुगु जिल्लामा काजमा गएका छन् । उनी विगत एक महिनादेखि 'भ्यासेक्टोमी क्याम्प' सञ्चालन गर्न त्यहाँ पुगेका हुन् ।